Drupella miafina amin'ny sampana Acropora. Ny ampahany fotsy dia vatohara ho an'ny vatohara Drupella nihinana ny vatohara akaikin'ny vatoharan-dranomasina sisa. Sary © The Nature Conservancy
Drupella dia siny misy kirany hatramin'ny 5 cm lava izay rakotra tsotsotra kely na kiraro. Mipoitra ny fotsy manopy fotsy ary manopy volontsôkôlà fa indraindray miloko volomparasy rehefa maniry amin'ny alokaloka mena. Matetika izy ireo no miaina amin'ny haran-dranomasina any Indonezia. Matetika izy ireo no miafina ao anaty valan-javaboary an-tapitrisany mandritra ny andro.
Drupella mihinana karazam-bolo vita amin'ny vatohara amin'ny alalan'ny fanesorana ny vatan'ny karaoty ary hamela fotsy fotsy izay afaka rakotra ala. Ny fihinanana tsaramaso dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fitomboan'ny haran-dranomasina. Drupella dia aleo mihinana karazam-bary mitovitovy amin'ny fitomboan'ny fitomboana, toy ny Acropora ary Pocillopora,ref saingy hanome sakafo ny ankamaroan'ny vatohara raha tsy misy ny karazana tiany. ref Ny fandalinana tany Kenya dia nahita azy ireo tamin'ny ankapobeny Porites ary mahazatra kokoa amin'ny haran-dranomasina matavy kokoa noho ny fanakatonana fisotroana any amin'ny MPA.ref Drupella Ny ankamaroany dia mamorona clusters amin'ny sampana efa maty misy vatosoa mivelona any am-paradisa, lalina ao anaty tsipika, eny ambany vatolampy, na amin'ny vatohara maty. Ireo cluster ireo dia avy amin'ny sifotra vitsivitsy mba ho an'olona arivo tapitrisa.
Vokatry ny Drupella Mety hahatonga ny fiainana an-davan'andro amin'ny haran-dranomasina. Ohatra, any andrefan'i Aostralia sy Japana, Drupella Nihena ny fihenan'ny vatohara tamin'ny fanakanana ny ala. ref Any avaratrandrefan'i Aostralia, Drupella dia nahatonga fahafatesan'olona maro, namotika ny 90% amin'ireo vatohara any amin'ny faritra sasany ao amin'ny harambato avaratra ao amin'ny Ningaloo Reef. ref Ny fandrobana ny haran-dranomasina Ningaloo dia mety nahatonga ny Drupella Nihena ny isan'ny mponina, noho ny fihenan'ny trondro (triggerfish, porkupinefish, lozisialy, snappers, ary emperor brems), izay voarakitra ao amin'ireo vatosin'ny Kenyana, izay nitombo be ny isan'ny olona tao amin'ny 1980s. ref Na dia Drupella Misy ny fipoahana, amin'ny ankapobeny Drupella dia miteraka haingana. Na izany aza, amin'ny fisidinana ambany Drupella dia mety mbola hisy fiantraikany amin'ny rafitry ny vatohara. Mitovy amin'ny kisendrasendra, Drupella Mety hanampy ihany koa ny fitazonana ny fahasamihafana amin'ny haran-dranomasina amin'ny fikajiana ny haran-dranomasina mitombo (ohatra, Acropora) mba hahafahan'ny karazam-bary mitombo kokoa.
Inona no mahatonga Drupella Mipoitra?
Drupella no niorina tao anatin'ny sampan'ny mpanjono. Sary © GBRMPA
Tsy mazava ny antony mahatonga ny fipoahana Drupella, fa ny fiantraikan'olombelona toy ny fitrandrahana an-tanety, fitrandrahana Drupella Ireo biby mpiremby, ary ny fiantraikan'ny haran-dranomasina miaraka amin'ny antony voajanahary (fanodinana lavalava) dia heverina ho antony mety hitranga. ref Ny fiatombohan'ny vanim-potoana dia manolotra fifandraisana sasantsasany amin'ny oscillations misy ranomasina (oh: El Niño Southern Oscillation).
Ny hafa manoro izany Fiovan'ny toetr'andro ary ny salinity dia mitondra anjara biriky.ref Fandalinana Drupella tany Hong Kong dia nampiseho fa tena betsaka kokoa Drupella dia nahasarika ny vatohara izay notsindriana sy tao anaty rano saline ambany noho ny vatohara tsy manan-kery.ref Toy izany koa, ny vatohara tao amin'ny Haran-dranomasin'ny Barrage Great, izay simba noho ny rivodoza Ivor tao 1990, dia nisy fiantraikany bebe kokoa tamin'ny Drupella. ref Ny fianarana vao haingana dia nanamarika fisondrotan'ny fipoahana Drupella amin'ny vatohara voan'ny aretina. ref Ny fikarohana dia manondro fa mampikorontana ny mikraoba vokatry ny haran-dranomasina simba Drupella Ny sakafo sy ny fikarakarana ny fambolena Drupella dia voamarik'izy ireo teo amin'ny vatohara nopotehina tamin'ny toerana be mpitsidika. ref
Methods to fanaraha-maso Drupella . Tetik'asa fitantanana izay mitaky ny fandrahonana Drupella Ny vokatra amin'ny ankapobeny dia ny fanaraha-maso ny fizarana sy ny habetsahana Drupella (amin'ny taona isan-taona na isaky ny taona maromaro, arakaraka ny fahaverezan'ny fihoaram-pefy) na fikarohana momba ny fanaparitahana sy ny habetsaky ny mpitsikilo manan-danja Drupella. Fandinihana ny Florida Keys izay nanesorana ny fanesorana karazana siramamy hafa (Coralliophila abbreviata) avy amin'ny vatohara dia nahita fa ny valanaretina izay nesorina dia nipoitra hatrany ny faritra voakaly mivantana kokoa noho ireo izay nijanona teo amin'ny toeran'ny sigara. ref Ireo vokatra ireo dia maneho fa ny fanesorana kely amin'ny fanesorana ny sifotra dia mety ho fiarovana amin'ny fiarovana tsara, na dia tsy maintsy dinihina ny fiheverana hafa toy ny vola / tombony amin'ny fanesorana sy ny andraikitry ny bibilava toy ny karazam-borona hafa.
Ny Sampan-draharaha misahana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny tontolo iainana Aostralia, Tetikasam-pikarohana fikarohana momba ny Siansa - Ningaloo Marine Park Drupella Fandaharam-potoana fanaraha-maso maharitra
Ny toetry ny mpandroba Coral Drupella cornus ao amin'ny Ningaloo Marine Park